မျက်နှာနှင့် နှုတ်ခမ်း တစ်ဝိုက်မှာ ” မှဲ့” ရှိခဲ့ရင် …..
မျက်နှာနှင့် နှုတ်ခမ်း တစ်ဝိုက်မှာ ” မှဲ့” ရှိခဲ့ရင် ….. နှုတ်ခမ်းတစ်ဝိုက်မှာ ”မှဲ့” ပါတဲ့သူ အများစုဟာ သနားစရာ၊ ချစ်စရာ အလွန် ကောင်းကြပါတယ် …။ သူတို့တွေဟာ အပြင်ပန်းမှာ ခက်ထန် ကြမ်းတမ်းတယ် ထင်ရပေမယ့် အတွင်းစိတ် သဘောထားကတော့ အလွန် နူးညံ့ သိမ်မွေ့ပါတယ် …။ ပွစိပွစိလုပ်တာကတော့ ဝါသနာပါ :- သူများကို ကူညီလိုက်လို့ ကိုယ့်မှာ သုညဖြစ်သွား ခဲ့ရင်တောင် ကိုယ်ကူညီလိုက်တဲ့သူ အဆင်ပြေနေတယ်ဆိုရင် ကြည်နူးပီတိ ဖြစ်နေတတ်တဲ့ သူတွေပါ …။ နှုတ်ခမ်းတစ်ဝိုက် ”မှဲ့” ပါတဲ့သူတွေဟာ စေတနာလည်း အရမ်းကောင်းသလို သံယောဇဉ်လည်း အလွန်ကြီးကြတဲ့ သူတွေ ပါ …
သားကို အရှက်ကြောင့် ပစ်ခဲ့တာလား….အသက်ကြောင့် ပစ်ခဲ့တာလား….
သားကို အရှက်ကြောင့် ပစ်ခဲ့တာလား…. အသက်ကြောင့် ပစ်ခဲ့တာလား…. အမိမဲ့သား ရေနဲငါး သွေးမပျက်ပါ အမေ ပေးရက်တာ အမေ့ဆန္ဒ သံသယ ဆိုတာ မထားပါရစေနဲ့တော့ သားဟာ အမေ့သားပါ အဖေထားခဲ့တာ အမေပါ အမေထားရက်တာ သားပါ အ မေ သား ကို… အ ရှက် ကြောင့် ပစ် ခဲ့ တာ လား? အသက်ကြောင့် ပစ်ခဲ့တာလား? လွမ်းရေးကြောင့် ပစ်ခဲ့တာလား? ဝမ်း ရေး ကြောင့် ပစ် ခဲ့ တာ လား? နားလည်ပါရစေ အမေ နို့ဘူးထဲက နို့ချိုရည် အမေ့နို့ မဟုတ်မှန်း သားသိတယ်… နူးညံ့စွာထွေးထားတဲ့ …
(၂၀)ကျော်တွေထက် အသက်(၃၀)ကျော်မမ တွေက ပိုဆွဲဆောင်မှုရှိနေရခြင်း အကြောင်းအရင်း(၇)ချက်
(၂၀)ကျော်တွေထက် အသက်(၃၀)ကျော်မမ တွေက ပိုဆွဲဆောင်မှုရှိနေရခြင်း အကြောင်းအရင်း(၇)ချက် ဒီနေ့ခေတ် အသက် ၃၀ ကျော်အမျိုးသမီးတွေဟာ ၂၀ ကျော်အရွယ်မိန်းကလေးတွေထက် ပိုပြီးလည်းလှ ပိုပြီးလည်းစမတ်ကျကြည့်ကောင်းနေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အပေါ်ယံလှနေတာမျိုးပဲမဟုတ်ဘဲ သူတို့ရဲ့ အပြုအမူ၊ အပြောအဆိုနဲ့ ခံယူချက် စတာတွေကလည်း လေးစားစရာကောင်းနေပြီး အဖက်ဖက်က ပြည့်စုံတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်နေတာမျိုးပါ။ အဲ့ဒီလိုမျိုး အဖက်ဖက်က ပြည့်စုံလှပတဲ့ အမျိုးသမီးလေးတွေဖြစ်နေတာဟာ ဒီအကြောင်းရင်းတွေကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်နော်…. (၁) အသက်ကြီးလာပြီလို့တွေးပြီး စိတ်ဖိစီးတာမျိုးမရှိဘူး ” အသက် ၃၀ အရွယ်ကိုရောက်လာပြီဆိုတာနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်က အသက်ရလာပြီ၊ အိမ်ထောင် မပြုသေးဘူးလား၊ ကလေးမယူသေးဘူးလား စသဖြင့် မေးတတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုသတ်မှတ်ချက်တွေကို ဂရုစိုက်မနေဘဲ အေးအေးဆေးဆေး လစ်လျူရှုနေနိုင်တဲ့အပြင် ကိုယ့်အတွက် …
ခြေဖနောင့် ကွဲတတ်သူများ အတွက် ပျောက်ကင်းသည့် နည်းလမ်းလေးများ….
ခြေဖနောင့် ကွဲတတ်သူများ အတွက် ပျောက်ကင်းသည့် နည်းလမ်းလေးများ… ခြေဖနောင့် ကွဲအက်ခြင်းအတွက် ရိုးရှင်း လွယ်ကူတဲ့ အိမ်တွင်း ကုထုံးလေးများ မကြာခင် တစ်မိုးကုန်လို့တစ်ဆောင်း ဝင်လာပါတော့မယ်။ ခန္ဓာကိုယ်တွင်း အပူဓာတ်များသူတွေနဲ့၊ နေ့လယ်ဘက် နေပူပူထဲလမ်း လျှောက်အထွက်များသူတွေအဖို့ ဆောင်းရာသီရောက်တဲ့အခါ အပူကန်ထွက်လေ့ရှိကြပြီး ခြေဖနောင့် အရေပြားများ ကွဲအက်လာ ပါတော့တယ်။အချို့သူတွေမှာ သိပ်ဆိုး ဆိုးရွားရွားကြီးမဟုတ် အမြင်ဆိုးရုံလောက်သာ ကွဲအက်ကြသော်လည်း အချို့ကတော့ ကွဲထွက်နေသော အရေပြားအစအနတွေက တစ်ဆင့် အဝတ်အထည်နဲ့ ပွတ်တိုက်၍ အသားစလန်သွေးထွက်ကာ မေးခိုင်ပိုး အန္တရာယ် ဖြစ်စေလာနိုင်ပါတယ် …။ အသေးအဖွဲ ခြေဖနောင့်ကွဲအက်ခြင်းအတွက် ရေချိုးတဲ့အခါ ဖနောင့်ချင်းချင်း ခပ်ကြမ်းကြမ်းပွတ်တိုက်၍သော် လည်းကောင်း၊ ရေချိုးခန်းသမံတလင်း သို့မဟုတ် ရေချိုးခန်းသုံး ကျောက်ခဲတုံးလေးဖြင့် …
This Year : 277433
Total Users : 572567
Total views : 2649012